Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare Puntland oo kormeer ku tagay dugsiga ardayda dhagoolayaasha ee Garowe | puntlandi.com
Sunday, February 4th, 2018 | Posted by P2
Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare Puntland oo kormeer ku tagay dugsiga ardayda dhagoolayaasha ee Garowe
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Puntland Abshir Aw Yuusuf Ciise iyo Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Nugaal Xaashi Xuseen Faarax ayaa kormeer ku tagay Macadka ay wax ku bartaan ardayda dhagoolayaasha Hay’adda Daryeelka iyo hormarinta Dhagoolayaasha ee Puntland.
Wasiirka ayaa kormeerkiisa waxaa uu qayb-ka ahaa kormeero uu ku samaynayey schoolada ku yaala Magaalada Garoowe ee Caasimada Dowladda Puntland waxaana uu wasiirku u kuur galay Xaalada ay ku sugan yihiin aradayda dhagalayaasha oo wax ka barta macadka waxaana uu halkaas kula kulamay Maamulka Macadka oo uga xog waramay xaalada Machadka dhagoolayaasha.
Maamulaha Macadka aradyda dhagoolayaasha Hay’adda Daryeelka iyo hormarinta Dhagoolayaasha ee Puntland sakariye siciid Yuusuf ayaa sheegay in macadka haatan ku suganyihiin 40 arday oo ka kala yimid gayiga ay soomaalidu degto kuwaas oo waxbarasho iyo hoyba uu u yahay Macadku waxaana uu intaa ku daray inay jiraan baahiyo uu qabo macadku isagoo ka codsaday dowladda iyo ganacsatadaba inay gacan taakulayn siiyaan schoolka.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare Puntland Abshir yuusuf Aw Ciise ayaa dhankiisa sheegay in wasaaradiisu ay muhiimad gaar ah siin doonto goobaha ay wax ku bartaan dadka araga lahayn, naafada iyo kuwa dhagoolayasaha ah waxaana uu intaa raaciyey inay shcoolka dhagoolayasha u baahan yahay dhisme gooni ah.
Waxaa kalo sheegeen Masuuliyiinta Wasaaaradda Waxbarashada in wax laga qaban doono Waxbarshada Baahiyaha Gaarka.
Dugsiga dhagoolayaasha ayaa waxaa ka muuqaday arday si fiican wax uga baranaysa dugsigaa iyagoo Macalimiinta qaybtoodna ka yimi Magalada boorame.
Ciidanka PSF oo dilay dhagar qabayaal katirsan argigixisada kuwa kalena gacanta ku dhigay.
(DHEGAYSO) Ciidanka kantaroolka Garowe oo qabtay Rag looga shakisan yahay inay katirsan yihiin argigxisada.
Faah Faahin :Ciidamada Booliska G/Nugaal Oo Garoowe ku qabtay Gaari siday Raashin dhacay
(Dhagayso) Beelo lagu heshiisiinayo Degmada Towfiiq iyo Ceel biyood kii degmada oo kooxo Hubaysan ay Soo weerareen